नेपालीहरू त जातै महाराज, हाम्रो शिक्षालाई कुरी-कुरी | Afnokura's Weblog
अगस्ट 25, 2013 at 4:45 अपराह्न 1 comment
होईन नेपालीहरू विदेश आएर अरू त त्यस्तै हो फोन गर्न पनि जान्दैनन् भन्या । देश अनुसारको भेष भने झैं साधारणतया फोन गर्न त जान्नुपर्छ । नचिनेको व्यक्तिलाई फोन गर्दा आफ्नो पुरा नाम, अवस्था अनुसार आफ्नो ठेगाना र भेटन खोजेको व्यक्ति र काम भन्ने चलन छ । अझ जापानी कम्पनी अर्थात व्यक्तिलाई फोन गर्नुपरेको खन्डमा सवैभन्दा पहिले आफ्नो पुरा नाम, ठेगाना, फोन नम्वर र कामको कुरा गरिन्छ तर नेपालीहरु सीधै तपाई को वोलेको रे । अझ अर्को कुरा जापानमा कसैसँग दोस्रो व्यक्तिको फोन नम्वर माग्नु र दिनु भनेको सीधै प्राईवेसीको दृष्टिकोणले अपराध हो । तर हामीहरू सजिलै जसलाई जस्को नम्वर पनि दिन्छौं । कतिपयले त फेसवुकमा फोन नम्वर, पासपोर्ट नम्वर, व्लड ग्रुप सम्म राखेका हुन्छौ । वास्तवमा भन्ने हो भने सुरक्षाको दृष्टिले यो अति नै खतरा हो ।
आजभोलि नेपालीहरूलाई नाम सोध्यो भने मरी गए नि आफ्नो थर भन्न खोज्दैनन् । आखिर किन ? विभिन्न दृष्टिकोणले विदेश नेपालीहरूको लागि एउटा अवसर हो । पैसा कमाउने अवसर, सीप सिक्ने अवसर, अनि अन्य कुराहरू । किनकी यसले असल समाज निर्माणको लागि अति नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । चाहे विदेशमै सेटल भएर वसुन, चाहे नेपाल फर्केर जाउन तर अनुशासन, नैतिकता र आफूले सिकेको सीप सँधै आफूसँगै हुन्छ । नेपाली त जातै महाराज भन्छन हुन पनि सोह्रै आना सत्य हो । अर्काको देशमा आएर पनि हामीलाई साँढे हुनुपर्ने । यसो सोच्ने हो भने हामीलाई जापानीहरूले त्यति हेला गर्दैनन् जति हामी नेपालमा भारतीयहरूलाई गर्छौ । सीमित ठाउँ र समय वाहेक जापानीहरूले हामीलाई न त नराम्रो व्यवहार गर्छन न त वचन नै लाउँछन । जहाँ हामी तराईतिरकै हाम्रा नेपाली दाजुभाईहरूलाई धोति भन्दै गाली गर्ने, चटपटे खोसेर (झिकेर) खाईदिने, नराम्रो वचन र व्यवहार गर्ने गर्दछौं ।
यस्ता कुराहरू लेख्ने हो भने लेखेरै सकिंदैन । जन्मँदै जानेर कोही आएको हुँदैनन् । तर समय र परिस्थिति अनुसार सिक्दै र व्यवहारमा लागू गर्दै नजाने हो भने हामी कहिले परिवर्तन हुन्छौं त ? धेरैजसो आई.ए., वि.ए. पढेकाहरू अझै हालैका दिनहरूमा त पीएचडी गर्ने डाक्टर सापहरू पनि सस्तै छन् जापानमा । यी झीनामसिना कुराहरूको पनि ख्याल गर्न सक्दैनौं भने हामीले पढेर प्राप्त गरेको त्यो सर्टीफिकेटले मात्र केही लछारपाटो लाउनेवाला छैन । शिक्षा अरू केही होईन वानीहरूको निर्माण हो -भनिन्छ । पढेर, देखेर, भोगेर पनि हामी हाम्रो वानी परिवर्तन गर्न सक्दैनौं भने दोष कस्लाई दिने ? साधारण जापानीको भन्दा कमसल खालको सोचाई हाम्रो हुन्छ भने के हामीले आर्जन गरेको उच्चशिक्षा र धारण गरेको प्रमाणपत्रले हामीलाई कुरी-कुरी भनिराखे झैं लाग्दैन र ?
आउनुहोस् सासिमी हेरूँ…	जापानमा नेपाली माथि अज्ञात व्यक्तिले सांघातिक आक्रमण
1. नेपाली केटो | अगस्ट 25, 2013 मा 5:01 अपराह्न
सोह्रै आना सही हो यो कुरा । तर नेपालीलाई जति नै लेखेर पनि सुन्नेकान लाए पो ? नेपाललाई जापान जस्तो वनाउने होईन जापानलाई नेपाल जस्तो वनाउछन विस्तारै ।